ဆရာမလေးအထိအတွေ့ | CeleTrend
ဒီ ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင်က ရဲလွန်း ။ ရဲလွန်းသည် ဆင်းရဲတွင်း နက်တဲ့ အခြေခံ လူတန်းစား မိသားစုထဲမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကောင်လေး တယောက် ။ အဖေက စက်ရုံတရုံက အလုပ်သမား ။ အမေက ဈေးရောင်းသည် ။ တဦးတည်းသော သား ငဆိုးလေး ။ ပိန်ပါးလို့ အရပ်မြင့်တယ်လို့ ပို ထင်ရသည် ။ ငယ်ငယ်ထဲက အစားထက် ကစားကို ပိုမက်နေခဲ့တာမို့ရယ်..မရှိဆင်းရဲသား နင်းပြား ဘ၀တွေမို့ မစားနိုင်တာရယ်ကြောင့် ရဲလွန်းသည် ပြားချပ်ချပ် ပိန်ကပ်ကပ်ကလေး ။ အသက်၁၉နှစ် ကောင်လေး ။ ဆံပင်က ရှည်သည် ။ လိန်ကောက်နေတဲ့ ဆံပင်နီကြောင်ကြောင်တွေက ပုခုံးအထိ ရှည်သည် ။ လက်ကြော မတင်းတဲ့ လူပျင်းကလေး ။ ရဲလွန်းသည် ကျောင်းလည်း မတက်ချင်..စာလည်း မကျက်ချင်. တအားဖျင်းတဲ့ လူဖျင်းကလေး လို့ သူ့ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေက ပြောတာ ခံရတဲ့ကောင် ။ ဖျင်းလည်းဖျင်း ပျင်းလည်းပျင်းတဲ့ ရဲလွန်းသည် ဆေးခြောက်တော့ ရှူတတ်သည် ။ ဆေးခြောက်ရှူပြီး ချောင်ကောင်းကောင်း တနေရာရာမှာ နှပ်နေချင်တာက သူ့အကျင့် ။ သူ့ဝါသနာ ။ သူက အဲလို နှပ်နေ အိပ်နေတာကို “ ယူတယ်…” လို့ သုံးနှုံးတတ်သည် ။ နေရာယူနေသည် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် တဲ့ ။ သူ ၀ါသနာ ပါတာက မိန်းမ ။ မိန်းမ ၀ါသနာကြီး တဏှာက တအားကြီးတဲ့ နှာဘူးလေး ။ ရဲလွန်းသည် ငယ်ငယ်လေးထဲက အတန်းကျ ကျောင်းသားကြီးတွေရဲ့ လမ်းပြသင်ကြားပေးတာတွေကြောင့် မိန်းမနဲ့ ယောက်ျားလိင် ဆက်ဆံတာတွေကို သူ သိနေသည်.. နားလည်နေသည်။ ဓါတ်ပုံတွေ မြင်ဘူးသည် ။ မြန်မာ အပြာဇာတ်လမ်း စာအုပ်လေးတွေ ရော နိုင်ငံခြားက ရောင်စုံပုံစာအုပ်တွေကိုရော ကြည့်ဖူးသည် ။ ဒီ အတန်းကျ ကျောင်းသားကြီးတွေကြောင့်ဘဲ ရဲလွန်းသည် လက်နဲ့အာသာဖြေဖျောက်( ကွင်းတိုက် ) တတ်သွားတာ ဖြစ်သည် ။ ကွင်းတိုက်တတ်သွားတဲ့အခါ မိန်းမချောချောတွေကို မှန်းဆပြီး တနေ့ကို သုံးလေးခါထပ် မနည်း သူ ကွင်းတိုက်တော့တာဘဲ ။ ရဲလွန်းသည် အပြာစာအုပ်တွေထဲက မိန်းမ ၀တ်လစ်စလစ် ပုံတွေကို ကြည့်ရတာကို အားမ၇ဘူး ။ အပြင်မှာလည်း မိန်းမတွေရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးကိုယ်တွေကို ကြည့်ချင်လာသည် ။ မိန်းမတွေ ရေချိုးတာကို သူ ချောင်းကြည့်တတ်လာသည်
ရဲလွန်းတို့ နေတဲ့ ရပ်ကွက်က ကြမ်းသည် ။ အောက်ဆုံး အလွှာက လူတွေ နေကြတော့ ဆဲသံဆိုသံတွေက အချိန်အခါမရွေး မိုးမွှန်နေအောင် ကြားနေရသည် ။ ယောက်ျားတွေရော မိန်းမတွေရော သူတို့ရင်ထဲက ဒေါသတွေမကျေနပ်မှုတွေကို ရင့်ရင့်သီးသီး ထုတ်ဖေါ်ကြသည် ။ ရဲလွန်းရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကလည်း အဆဲသန်သည် ။ သူ့အမေက သူ့ကို ခေါ်တာက “ စောက်ပတ်စားလေး ” “ဖါခေါင်းလေး ” တဲ့ ။ အမြဲတစေ ရိုက်ကြထိုးကြ ခုတ်ကြထစ်ကြတွေ ဖြစ်နေတတ်တာမို့ တချို့က “ မက္ခရာနယ်မြေ ” လို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ်ကြသည် ။ အရင်တုံးက ရုပ်ရှင်လား ..ရုပ်ပြလား ရှိခဲ့ဘူးသည်လေ..။ မက္ခရာဓါး…ဆိုတာ ။ ရဲလွန်းတို့ အိမ်နဲ့ ကပ်ရက် နံရံဘဲ ခြားတဲ့ တဖက်ခန်းမှာ ရပ်ကွက်ဈေးလေးထဲမှာ အထည်ရောင်းတဲ့ ဒေါ်ထားထားညွန့် နေသည် ။ အသက် သုံးဆယ်လောက် တရုတ်သွေးပါတဲ့ အသားဖြူဖြူ ကိုယ်လုံးတောင့်တောင့် မိန်းမ ။ အပျိုကြီးလို့ ပြောကြတာဘဲ ။ ရဲလွန်းရဲ့ အမေ ဒေါ်ခင်သန်းကလည်း ဒီဈေးလေးထဲမှာဘဲ ငါးရောင်းတော့ ဒေါ်ထားထားညွန့်နဲ့ ခင်သည် ။ နေတာကလည်း ကပ်ရက် ဆိုတော့ အဆက်အဆံ အကူးအလူး ရှိသည် ။ ဒေါ်ထားထားညွန့် ရေချိုးပြီ..အ၀တ်လဲပြီ ဆိုရင် ရဲလွန်းသည် လူလစ်၇င် အမြဲလို ချောင်းကြည့်လေ့ရှိသည် ။ သူ့မိဘတွေ အိမ်မှာ မရှိကြတဲ့ အချိန် သူ အထပ်ခိုးပေါ်ကနေ ချောင်းကြည့်တဲ့အခါ ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားကြီးတွေ…စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို စူးစိုက်ကြည့်ရင်း ပုဆိုးကို လှန်ပြီး ကွင်းတိုက်တော့တာဘဲ ။ တခါတရံမှသာ သူမရဲ့ ပေါင်ကြားဂွဆုံနေရာက မိန်းမကိုယ်ကြီးကို သူ မြင်ရတတ်သည် ။ အမွှေးမဲမဲတွေနဲ့ ဒီ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို စတွေ့ရတဲ့ အချိန်တုံးက ဆိုရင် ရဲလွန်းသည် ခြေတွေ လက်တွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ရင်ပြီး သူ့ဖွားဖက်တော် လိင်တန်ဟာလည်း မတ်မတ်ကို ထောင်ပြီး ကွင်း တချက်နှစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တာနဲ့ သုတ်တွေ ဖွားကနဲ ဖွားကနဲ ထွက်ပြီး ပြီးသွားရသည် ။ ရဲလွန်းက သူ့အတန်းက သူ့သင်ဆရာမြင်ဆရာ အတန်းကျ ကျောင်းသားကြီးတွေကို အိမ်ကပ်ရက်က သူချောင်းနေကျ ဒေါ်ထားထားညွန့်အကြောင်းကို ပြောပြလေ့ရှိသည် ။ အထူးသဖြင့် မိန်းမ အတွေ့အကြုံ များခဲ့တဲ့ “ သန်းဝေ ” က ရဲလွန်းကို မြှောက်ပေးသည် ။ အဲဒီ ဒေါ်ထားထားညွန့်ကို အတင်း ကြံဖို့ နေ့စဉ် မြှောက်ပင့်ပေးသည် ။ ရဲလွန်းလည်း သန်းဝေ ပြောသလို ဒေါ်ထားထားညွန့်က တယောက်ထဲ အထီးကျန်နေတဲ့ အပျိုကြီးမို့ ယောက်ျားဆာနေတာကြောင့် သူ အတင်း တက်ကြမ်းရင် လက်ခံလိမ့်မယ် လို့ ထင်သွားသည် ။တနေ့မှာ ရဲလွန်း အိမ်မှာ တယောက်ထဲ ရှိနေခိုက် တဖက်အိမ်က ဒေါ်ထားထားညွန့် ရေချိုးနေတဲ့ အသံကို ကြား လိုက်ရလို့ ပြေးချောင်းပေမယ့် သူချောင်းနိုင်တဲ့ အချိန် ဒေါ်ထားထားညွန့်က ရေချိုးလို့ ပြီးသွားလို့ ထမိန်ရင်လျားနဲ့ အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်နေပြီ ။ ရဲလွန်းလည်း အနည်းဆုံး အ၀တ်လဲတဲ့အချိန် ဟိုဟာဒီဟာလေးများ မြင်ရလေမလား ဆိုပြီး ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို အပေါက်ရှာပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။ “ ဟာ….” ရဲလွန်းရဲ့ ပါးစပ်က အသံထွက်မသွားအောင် မနည်း သတိထားလိုက်ရသည် ။ သူ မြင်လိုက်ရတာက လုံးဝ ထင်မထားတာကြီး ။ ဒေါ်ထားထားညွန့်သည် အိပ်ခန်းထဲမှာ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်နေသည် ။ ဖြူဖွေးပြီး တောင့်ထွားတဲ့ ကိုယ်လုံးတီး မိန်းမတယောက်ကို မြင်လိုက်ရလို့ လူပျိုပေါက် လူပျိုရိုင်းကလေး ရဲလွန်းသည် မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ ပေါင်တန်ကြားက တောင်ထနေတဲ့ လိင်တန်ကို လက်တဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ရင်း တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်နေသည် ။ ဒေါ်ထားထားညွန့်က သူ့အိပ်ရာပေါ်မှာ လှဲလိုက်ပြီး မျက်လုံးတွေ စုံမှိတ်လို့ လက်တဖက်က ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်စိုင် တလုံးကို ဆုပ်ကိုင် ကျန်တဲ့ လက်တဖက်က ပေါင်ကြားက ခုံးထနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို အုပ်ကိုင်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖီလင်တွေ တက်နေသည် ။
ဟာ…သန်းဝေကြီး ပြောသလို လီးဆာလို့ ဖီးလ်တက်နေပြီ ထင်တယ်…..။ လိင်တန်ကို ကွင်းထု ပွတ်တိုက်ရင်း ဆက်ချောင်းနေလိုက်တော့ ဒေါ်ထားထားညွန့်သည် သူမ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်နေတာကိုပါ တွေ့လိုက်ရသည် ။ ပါးစပ်ကလည်း ခပ်တိုးတိုး တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်း ငြူနေသည် ။ ရဲလွန်းလည်း တဖက်အိမ်ထဲကို ပြေးသွားပြီး ဒေါ်ထားထားညွန့်ကို တက်လုပ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်မိနေသည် ။ ကြောက်ကလည်း ကြောက်သည် ။ သူတို့ ရပ်ကွက်သည် ခုတ်ထစ်ရိုက်နှက်တာတွေ အမြဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ စရိုက်တွေနဲ့လူတွေ များပြားလွန်းလို့ နေ့စဉ်လိုလိုဘဲ ရပ်ကွက်ထဲကို ရဲတွေ လာလာပြီး ဆွဲကုတ် သွားတာတွေကို သူ မြင်ဘူးနေသည် ။ ဒေါ်ထားထားညွန့် အလိုမတူဘဲ အော်လိုက်မှ လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့ ဂတ်တဲကို ပါသွားမှာကိုလည်း လန့်သည် ။ ကြည့်နေတဲ့ အချိန် ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ လက်ချောင်းတွေဟာ အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲကို တစွပ်စွပ်နဲ့ ၀င်ထွက်နေပြီ ။ ဟာ…သူ တကယ် ဆာနေတာဘဲ …. လုပ်ကလည်း လုပ်ချင်..လန့်ကလည်း လန့်နဲ့ ကွင်းကိုဘဲ ဖိဆောင့်ထုနေမိရသည် ။ တဖက်အိမ်က ဒေါ်ထားထားညွန့် တယောက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကာမ အရှိန် မြင့်မားလာပြီး တအီးအီး နဲ့ အသံကျယ်လာသလို ဒီဖက်က ချောင်းကြည့်ပြီး ကွင်းထုနေတဲ့ ရဲလွန်းလည်း အရှိန်တက်လာပြီး ကွင်းကို တအားဆောင့်ထုနေသည် ။ ဒေါ်ထားထားညွန့်သည် လက်နဲ့ ပွတ်နှိုက် အာသာဖြေနေရာက ဖျတ်ကနဲ ရဲလွန်း ရှိနေတဲ့ နံရံဖက်ကို စူးစိုက် ကြည့်လိုက်သည် ။ ရဲလွန်းဖက်က အသံတခုခုကို ကြားလိုက်လို့ ဖြစ်နိုင်သည် ။ အိုး….ဒေါ်ထားထားညွန့် လှဲအိပ်နေရာက ထလာပြီ ။ နံရံအနားကို တိုးကပ်လာသည် ။ ရဲလွန်းလည်း ချောင်းနေရာကနေ မျက်လုံးတွေကို နံရံအပေါက်ကနေ ခွာလိုက်သည် ။ “ ဟေ့..ဟိုဖက်က ရဲလွန်း မဟုတ်လား…မသာလေး….” ရဲလွန်းလည်း ကြောက်လို့ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ငြိမ်နေသည် ။ အရည်ကြည်တွေ စီးကျနေတဲ့ သူ့လိင်တန်ကိုတော့ ခလယ်လောက်ကနေ ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ ။ “ ဟဲ့ စောက်ကောင်လေး…နင် ငြိမ်မနေနဲ့..နင်ချောင်းတာ ငါသိလို့ တမင်တကာ လုပ်ပြနေတာ..နင် ကွင်းထုနေတယ် မဟုတ်လား…..ဟဲ့ ရဲလွန်း…ငါခေါ်နေတယ်လေ..မကြားဖူးလား…..” ရဲလွန်းလည်း “ ကြားတယ်…ကြီးတော်…” လို့ သံတုန်တုန်နဲ့ ပြန်ဖြေလိုက်သည် ။ “ ဒီဖက်ကို လာခဲ့..နောက်ဖေးတံခါး စေ့ရုံတင် စေ့ထားတယ်…” “ ဟုတ်..ကြီးတော်….” လို့ ရဲလွန်း ဖြေလိုက်ရင်း ပုဆိုးကို ကောက်ဝတ်ပြီး ထပ်ခိုးပေါ်က ဆင်းသည် ။ လှေခါးဆင်းတဲ့အချိန် ဒူးတွေ က တုန်ခါနေသည် ။ လိင်တန်ကတော့ မတ်မတ်ထောင်နေဆဲပါဘဲ ။
အိမ်အနောက်ဖက်ကို ထွက်လိုက်ပြီး တဖက်က ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အိမ်ရဲ့ လှေခါးသုံးထစ်ကို တက်လိုက်ပြီး နောက်ဖေးတံခါးကို တွန်းကြည့်သည် ။ ဒေါ်ထားထားညွန့် ပြောသလိုဘဲ တံခါးက စေ့ရုံတင် စေ့ထားတာ တွေ့ရလို့ အသာတွန်းဖွင့်ပြီး ၀င်လိုက်သည် ။ ထပ်ခိုးပေါ်က ဒေါ်ထားထားညွန့်က “ လာခဲ့ ရဲလွန်း….” လို့ အသံတိုးတိုးနဲ့ ခေါ်လိုက်တာကို ကြားလိုက်ရသည် ။ ဟီး…သန်းဝေကြီး ပြောတာ မှန်နေပြီပေါ့…..စော်ကြီး တအား ထန်နေပြီ..ငါ့ကို ခေါ်လိုးခိုင်းတော့မယ်..ဟီး…ဟီး… ပွတာဘဲ…..။ ဒေါ်ထားထားညွန့်သည် အခုတော့ ထမိန်ကို ရင်လျားထားသည်ကို ထပ်ခိုးပေါ် ရောက်သွားတဲ့အခါ ရဲလွန်း တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ နှာဘူးလေး….ကဲ ပုဆိုး ချွတ်စမ်း..ကြည့်ရအောင်..နင့်လီးကို…” လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြောရင်း ရဲလွန်းရဲ့ ပုဆိုးကို ဒေါ်ထားထားညွန့်က ဖျတ်ကနဲ ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။ ရဲလွန်းလည်း သူ့စိတ်ကူးတွေဟာ တကယ် ဖြစ်လာနေပြီမို့ တအား စိတ်တွေ ပျော်သွားပြီး စောစောကလို တအားနင်း ကြောက်မနေတော့ဘူး ။ “ ကြီးတော်….ကြီးတော်လည်း ချွတ်လိုက်လေ..စောစောက တအားကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာ…” လို့ပြောလိုက်ပြီး ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ ရင်လျားထားတဲ့ ထမိန်ကို ဆွဲဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် ။ “ ဟွန်း…သေနာလေး..နင် ငါ့ကိုေ၇ချိုး လည်းချောင်း..သနပ်ခါးလိမ်းလည်း ချောင်း..နှာထ ကွင်းထုနေတာ ငါ မသိ ဘူး မထင်နဲ့..တကထဲ လူကဖြင့် လက်တောက်လောက်…” ပြောလို့မှ မဆုံးသေး..ရဲလွန်းက သူ့ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်လို့ ဒေါ်ထားထားညွန့်လည်း ရဲလွန်း ပေါင်ကြားကို မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တုတ်ဖြိုးရှည်လျားတဲ့ ရဲလွန်းရဲ့ လိင်တန်ကို တွေ့သွားလို့ ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ အံ့သြသွားသည် ။ “ ဟယ်….လီးက တော်တော် ကြီးတာဘဲ….ငါ…ငါ…ထင်မထားဘူး . . ” လူနံပိန် ကျွဲဂျိုလိန် ဆိုတဲ့ စကားက တယ်မှန်တာဘဲ …..လို့ တီးတိုး ရေရွတ်ရင်း ရဲလွန်းရဲ့ လိင်တန်ကို ဆတ်ကနဲ ဆုပ်ကိုင်လိုက်လေသည် ။ ရဲလွန်းရဲ့ပိန်ကပ်ကပ် ကိုယ်လုံးလေးကြောင့် သူ့လိင်ချောင်းက ပိုကြီးသည်လို့ ထင်နေရသလား မသိ ။ ဒေါ်ထားထားညွန့်သည် လုံးပတ်တုတ်တုတ်နဲ့ ပူနွေးနွေး လိင်ချောင်းကို ကိုင်ဆုပ်လိုက်ရတဲ့အခါ ကာမစိတ်တွေ က ထောင်းကနဲ ထသွား ရပြီး…“ ရဲလွန်း..နင် မိန်းမလိုးဖူးတယ် မဟုတါလား..” လို့ မေးရင်း သူ့လိင်ချောင်းကို ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ် လိုက်သည် ။ ရဲလွန်းက “ မလိုးဖူးသေးဘူးဗျ…” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်သည် ။ “ ဟင်…တကယ့်စောက်ရူးလေး…ဟွန်း….သူ့ကိုယ်သူ ဟန်ပေးနေတာ…ကဲ..ကဲ….လာ…လာ….ငါလည်း ရမယ့် ရတော့လည်း တကယ့် လီးအသစ်ချပ်ချွတ်လေး ပါလား…..” လို့ ပြောရင်း ရဲလွန်းကို ပက်လက်လှန် ပေါင်ကားပေးပြီး အပေါ်က တက်မှောက်ခိုင်းပြီး လိင်တန်ထိပ်ကို အင်္ဂါစပ်ပေါက်ဝမှာ တေ့ကာပေးလိုက်သည် ။ “ ထည့်…ထည့်…..သွင်း..သွင်း…..” ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ သင်ပြပေးမှုနဲ့ ရဲလွန်းသည် မိန်းမလိုးဖူးသွားသည် ။ ဒေါ်ထားထားညွန့် သည် ရည်းစားနဲ့ အရင်က လုပ်ဖူးခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပေါင်း ကြာမြင့်နေခဲ့ပြီ ။ အခု ရဲလွန်းနဲ့ ပြန်လုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန် ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အင်္ဂါစပ်မှာ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ မိန်းမတယောက်လိုဘဲ ကြပ်တည်းနေသည် ။
ရဲလွန်းလည်း ကျောင်းက သန်းဝေတို့လို ကျောင်းသားကြီးတွေကို သူ့အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောလို့ မပြီးတော့ ။ ဒေါ်ထားထားညွန့်လည်း ပြတ်လပ်သွားခဲ့တဲ့ ယောက်ျား လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ ပြန်တွေ့ရလို့ အရင်ကလို သုန်သုန် မှုန်မှုန် မဟုတ်တော့ဘဲ စိတ်လက် ကြည်သာ သွက်လက်လာသည် ။ လစ်ရင် လစ်သလို ရဲလွန်းနဲ့ ဖြုတ်ကြသည် ။ ရဲလွန်းကိုလည်း ဒေါ်ထားထားညွန့်က မုန့်ဖိုးတွေ ပေးတတ်သည် ။ သူ့ကို ကောင်းကောင်း ဆန္ဒဖြည့်ပေးတဲ့ ဒီကောင်လေးကို ဒေါ်ထားထားညွန့် ဘောက်ဆူး ချရတာ ။ ရဲလွန်းလည်း ဒေါ်ထားထားညွန့်နဲ့ အမြဲ လုပ်ဖြစ်နေပြီး စားဖူးလာတောက စားနေကျ တင် မကဘူး ။ အသစ် အဆန်းလည်း ထပ်စမ်းကြည့်ချင်လာသည် ။ တခါ ရဖူးသွားတော့ ဒီလိုဘဲ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီး တိတ်တိတ်ပုန်း ကျိတ်စားချင်နေမယ့် အန်တီကြီးတွေ ရှိနေမှာဘဲ ဆိုပြီး အနီးအနား ကပ်လှည့်ကြံဖို့ လိုက်ရှာလေတော့သည် ။ နောက်ထပ် သူ ရနိုင်မယ်လို့ ထင်မိတဲ့ အန်တီအရွယ် မိန်းမတယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့ အတန်းပိုင် ဆရာမ ဒေါ်မြမြနွယ် ပါဘဲ ။ ဒေါ်မြမြနွယ်သည် ယောက်ျားနဲ့ ကွဲထားသည် လို့ သူ သန်းဝေတို့ဆီက သတင်းကြားဖူးထားသည် ။ ခါးသေးတင်ကားတဲ့ ဒေါ်မြမြနွယ်ကို သူတို့ ကျောင်းသားတွေက ကြည့်ကြည့်ပြီး ပစ်မှားနေကြတာကြာပြီ ။ ဒေါ်ထားထားညွန့်ကို စားနေကျ ရဲလွန်းသည် ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်ကို စိတ်ကူးနဲ့ အ၀တ်တွေ ချွတ်ကြည့်ပြီး ဆရာမကိုလည်း ဒေါ်ထားထားညွန့် လိုဘဲ ဖင်ထောင်ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးလိုက်ရရင် တအား အီဆိမ့်နေမှာဘဲလို့ ပစ်မှားပြီး ညဖက် ဆိုရင် အိပ်ရာထဲ ကွင်းထုမိလေသည် ။ ဒေါ်မြမြနွယ်လည်း စာညံ့တဲ့ စာထဲ စိတ်မပါတဲ့ ရဲလွန်းကို ခုံပေါ်တက်ခိုင်းပြီး ကြိမ်နဲ့ဆော်ရတာလည်း အကြိမ် မနည်းတော့လို့ စိတ်ပျက်နေတဲ့အချိန်ပါ ။ ရဲလွန်းရဲ့ မိဘတွေကိုလည်း ကျောင်းကို ခေါ်ပြီး သူတို့သားသည် စာကို စိတ်မပါ ..မဖတ်..မကျက် ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပြီးတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါ ။ ဒေါ်မြမြနွယ်သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အင်္ဂလန်မှာ ပညာတော်သင် အဖြစ် ကျောင်းဆက်တက်ရင်း အဲဒီတိုင်းပြည်သူ တယောက်နဲ့ အကြောင်းပါသွားခဲ့လို့ ကွာရှင်းစာ လှမ်းတောင်းပြီး ကွာရှင်း ပြတ်စဲခဲ့လို့ တယောက်ထဲ အထီးကျန်နေတဲ့ မိန်းမ တယောက်ပါ ။ ခင်ပွန်းသည် ရှိစဉ်က နေထိုင်နေတဲ့ တထပ်တိုက်လေးမှာဘဲ တယောက်ထဲ ဆက်နေနေသည် ။ စာညံ့တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို သူ့အိမ်ကို ခေါ်ပြီး ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပညာသင်ပေးလိုတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထား ရှိသူမို့ ရဲလွန်းကို ပထမဆုံး အဖြစ် ကျောင်းဆင်းရင် သူနဲ့ တပါထဲ ခေါ်သွားပြီး သေသေချာချာ သင်ပေးဖို့ ဒေါ်မြမြနွယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
သူမ စိတ်ထဲမှာ ရဲလွန်းသည် ရိုးအတဲ့ နွမ်းနွမ်းပါးပါး ဆင်းရဲသား ကျောင်းသားလေး တယောက် လို့ဘဲ ထင်မှတ် ခဲ့ပြီး အဒေါ်အရွယ် မိန်းမကြီး တယောက်ကို မှန်မှန်လေး စားသုံးနေတဲ့ တဏှာကြီးလွန်းတဲ့ လူလည်လေး တယောက် ဆိုတာ လုံးလုံး မရိပ်စားမိခဲ့ဘူး ။ဒေါ်မြမြနွယ်သည် သူ့ကို ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက် ..အတန်းထဲမှာ ခုံပေါ်တက် ရပ်ခိုင်း ..နားရွက်ဆွဲပြီး ထိုင်ထလုပ်ခိုင်း..အမျိုးမျိုး ဒါဏ်ပေးတာလည်း အပြုံး မပျက်ဘဲ မနက် ဆိုရင် “ မင်္ဂလာပါ ဆရာမ ” ဆိုပြီး ပြေးလာ နုတ်ဆက်တတ်တဲ့ ရဲလွန်းကို သနားမိသည် ။ ပင်ကိုယ် စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ ကောင်လေးဘဲ ဆိုပြီး သူ့ကို စာတော်လာအောင် လုပ်ပေးမည် လို့ စဉ်းစားနေသည် ။ သန်းဝေ ဆိုတဲ့ ရဲလွန်းရဲ့ အကြံပေးကြီးကတော့ ရဲလွန်းတယောက် ဒေါ်မြမြနွယ် အတန်းရှေ့မှာ စာသင်နေတဲ့ အချိန် ကျောက်သင်ပုံးမှာ မြေဖြူနဲ့ စာရေးနေတဲ့အခါ သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေးရဲ့ အောက်က စွင့်ကား လှပတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တဆတ်ဆတ် တုန်ရင်နေတာကို ငေးမော ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထကြွ နေတာကို အမြဲ တွေ့နေတော့ မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ ရဲလွန်းကို ခေါ်ပြီး ခပ်တိုးတိုး နဲ့ “ ရဲလွန်း…မင်း ဆရာမကို လိုးဖို့ ကြံနေသလား..ငါ့လူ….” လို့ မေးသည် ။ ရဲလွန်းကလည်း သန်းဝေက သူ့ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ အကြံပေးကြီးမို့ ဘူးမကွယ်ဘဲ “ ကိုသန်းဝေရာ…ရမယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ချင်တာပေါ့ဗျာ..ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ ရေဆေးငါးကြီးဘဲ…” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်လေသည် ။ သန်းဝေလိုဘဲ အတန်းကျ ကျောင်းသားကြီး မင်းထိုက်ကလည်း ဆရာမ ဒေါ်မြမြနွယ်ကို ကြိတ်ပြီး သဘောကျနေသည် ။ မင်းထိုက်သည် ရဲလွန်းလိုဘဲ စာသင်ရတာကို စိတ် လုံးဝ မပါတဲ့အီးပေါလောကြီး ဖြစ်သည် ။ ဆရာဦးမြတ်စံ ဆိုတဲ့ ဆရာတယောက်က မင်းထိုက်သည် သုံးစားလို့ မရတဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ချီးဘဲ ရှိတဲ့ကောင်လို့ ဒေါသတကြီး အော်ငေါက်ဘူးသည် ။ မင်းထိုက်သည် စာမသင်ချင်ဘဲ ရုပ်ရှင်မင်းသား လုပ်ချင်နေတဲ့ကောင်မို့ ဆရာဦးမြတ်စံ ဘယ်လောက်ဘဲ သင်ပေးပေး သူ့ခေါင်းထဲကို ဘာမှ မ၀င်ဘူး ။ မှတ်လဲ မမှတ်မိဘူး ။ မင်းထိုက်က ရဲလွန်းကို အတန်းထောင့်ကို ဆီဲ ခေါ်ပြီး…“ ဆရာမကို ငါ ကြိုက်နေတယ် ကောင်လေး..မင်းဖါသာ ရပ်ကွက်ထဲက ကြီးတော်ကြီးကို လိုးနေစမ်းပါကွာ..လောဘမကြီးပါနဲ့ ခွေးကောင်လေး”လို့ ကြိမ်းထားသည် ။ ရဲလွန်းကတော့ မင်းထိုက်ကို လူပေါကြီး တကောင်လို့ဘဲ မှတ်ယူထား ပုံရသည် ။ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ဂရုကို မစိုက်ဘူး ။ ဒေါ်မြမြနွယ်သည် သူ့ယောက်ျား ရှိနေတုံးက သူ့ယောက်ျားရဲ့ ရုံးကားလေးနဲ့ ကျောင်းကို လာတတ်ပေမယ့် သူ့ယောက်ျားလည်း မရှိတော့တဲ့အခါ ဘတ်စ်ကားနဲ့ဘဲ ကျောင်းကို လာ ကျောင်းက ပြန်သည် ။ ဆရာမရဲ့ အိမ်သည် ကျောင်းနဲ့ သိပ် မဝေးလှဘူး ။ ဒီနေ့ ရဲလွန်းကို ဆရာမက ခေါ်ပြီး..“ ရဲလွန်း..မင်း မိဘတွေကို ဆရာမ ပြောခိုင်းတာ ပြောခဲ့ပြီးပြီလား….” လို့ မေးသည် ။
ရဲလွန်းက “ ပြောခဲ့ပြီ ဆရာမ..နေ့တိုင်း ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ဆရာမရဲ့ အိမ်ကို လိုက်သွားပြီး ကျူရှင် တက်ရမယ် ဆိုတာ ကျနော် ပြောခဲ့ပြီးပြီ….” လို့ ပြန်ဖြေသည် ။ ကျောင်းဆင်းသွားပြီးတဲ့ နောက် ရဲလွန်းသည် ဆရာမရဲ့ ခြင်းတောင်းကို ကူဆွဲပေးပြီး ဆရာမနဲ့ အတူတူ ကျောင်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်မှာ ဘတ်စ်ကား စောင့်စီးရသည် ။ ဘတ်စ်ကားသည် ထုံးစံအတိုင်း လူတွေ ပြည့်ကြပ်နေသည် ။ ဆရာမနဲ့အတူ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကို တိုးတက်တဲ့အခါ ဆရာမရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေနဲ့ သူ့ပေါင်တွေ လက်တွေ နဲ့ ထိမိကြသည် ။ ရဲလွန်းလည်း အတွင်းစိတ်က ဖေါက်ပြန်နေတဲ့ကောင် ဆိုတော့ ဒီလို ထိမိတာနဲ့ ကာမစိတ်တွေက ပြင်းထန်စွာ ထကြွပြီး ပုဆိုးထဲက လိင်တန်က ထောင်ထလာတော့တာဘဲ ..။ ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ ရဲလွန်းတို့လို ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ နေနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေသည် အောက်ခံဘောင်းဘီ ၀တ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိကြ ။ တထည်လောက်ဘဲ ရှိပြီး နေ့တိုင်း ကျောင်းတက်တဲ့အခါ ၀တ်မလာဖြစ် ။ အခုလို လိင်တန် တောင်မာလာတော့ ထိန်းချုပ်စရာ ဘောင်းဘီက မပါ ။ တခါထဲငေါငေါကြီး ရှေ့ကလူကို ထိုးထောက်မိတော့တာဘဲ ။ ရဲလွန်းလည်း ပထမဆုံးနေ့မှာ သူ အနောက်ကနေ လီးနဲ့ ထောက်လိုက်ရင် ဆရာမ စိတ်ဆိုးသွားပြီး အနားကပ်ခွင့် မရတော့မှာကို ကြောက်သည် ။ သူ့လီးနဲ့ မထောက်မိစေဖို့ လွှဲပြီး ရပ်သည် ။ တိမ်းရှောင်သလို ဆရာမရဲ့ ခြင်းတောင်းနဲ့လည်း ကာသည် ။ ဒါကြောင့် သူလီးတောင်တာကို ဆရာမ မသိလိုက်ဘူး ။ ဆရာမ ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင် ကို ရောက်ပြီ ။ ဆရာမ က “ ရဲလွန်းရေ..ဆင်းရအောင်ကွယ်..ဆရာမတို့ လမ်းးထိပ်ကို ရောက်ပြီ…” လို့ လက်ကလေးနဲ့ တို့ပြီး ပြောသည် ။ ကားပေါ်က အဆင်း ထောင်နေတဲ့ လီးကို ဆရာမ မတွေ့အောင် သူ့ကျောင်းလွယ်အိတ်နဲ့ ကာသလို ဆရာမရဲ့ ခြင်းတောင်းနဲ့လည်း ဖုံးဖိလိုက်သည် ။ ဆရာမရဲ့ အိမ်က ဘတ်စ်ကားဂိတ်နဲ့ သိပ် မဝေးဘူး ။ တထပ်တိုက်ကလေး ပေမယ့် ရေညှိတွေ တက်ပြီး အပြင်ဘန်း ကြည့်လို့ မလှတဲ့ ဟောင်းနွမ်းနေသည် ။ ခြံဝင်းထဲမှာလည်း မြက်ပင်တွေ ခြုံနွယ်တွေက ထူထပ်နေသည် ။ ရဲလွန်းလည်း “ တနေ့ကျရင် ကျနော် လာပြီး ဆရာမရဲ့ ခြံကို ရှင်းပေးချင်တယ်…” လို့ ဆရာမကို ပြောလိုက်သည် ။ ဆရာမက အရမ်း သဘောကျသွားသည် ။ “ ရပါတယ်ကွယ်….” လို့ ပြောပြီး ကျေနပ်နေသည် ။ ဆရာမက “ ကဲ ရဲလွန်းရေ..လာ..ဒီ စားပွဲမှာ ထိုင်..စာဖတ်နေ..ဆရာမ အ၀တ်လဲ ရေမိုးချိုးလိုက်အုံးမယ်….ပြီးတော့ စာသင်ကြတာပေါ့..မင်း ဘိုက်ဆာလား..” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ရဲလွန်းက “ကျနော် ဘိုက်မဆာပါဘူး..ဆရာမ….” လို့ ပြန်ဖြေသည် ။ တခြားလူ ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့ ဆရာမရဲ့ တိုက်ကလေးထဲမှာ သူနဲ့ ဆရာမနဲ့ဘဲ ရှိနေတာက ရဲလွန်ူရဲ့ စိတ်တွေကို လှုပ်ရှား ဖေါက်ပြန်စေသည် ။ ဆရာမသည် သူ့အိပ်ခန်းထဲကို ၀င်သွားပြီး တံခါးကို ပိတ်လိုက်သည် ။
ရဲလွန်းသည် ဆရာမတော့ မကြာခင်မှာ ကျောင်းဝတ်စုံကို ချွတ်ပြီး အိမ်နေရင်း အ၀တ်အစားကို လဲတော့မည်..ရေချိုးမည် လို့လည်း ပြောတာမို့ ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ဖြစ်တော့မည် လို့ အတွေးတွေ ၀င်ပြီး လိင်တန် မတ်မတ်ထောင်နေသည် ။ ဆရာမ အ၀တ်လဲတာ ရေချိုးတာကို ချောင်းချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာသည် ။ရဲလွန်း ဆရာမ ဒေါ်မြမြနွယ် ရေချိုးတာကို ချောင်းဖို့ ကြိုးစားသည် ။ ရေချိုးခန်းထဲကို ချောင်းဖို့ အပေါက် ရှာမတွေ့တာကြောင့် ရေချိုးခန်းနဲ့ ကပ်ရက် မှောင်မဲနေတဲ့ စတိုခန်းလေးထဲကို ၀င်ကြည့်လိုက်တော့ ရေချိုးခန်းထဲက မီးရောင်ကို သုံးထပ်သားနံရံက အပေါက်လေးတွေကနေ တွေ့လိုက်ရလို့ သူ တအား ၀မ်းသာသွားသည် ။ ဒီအပေါက်လေးတွေကနေ ရေချိုးခန်းထဲကို သူ ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။ ရဲလွန်းသည် မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် အသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်ရီနေသည် ။ ဆရာမကို ကိုယ်တုံးလုံး မြင်လိုက်ရလို့ပါ ။ ဖြူဖွေးတဲ့ အသားအရည် တောင့်တင်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ကိုယ်လုံးတွေနဲ့ ဆရာမကို ကျောင်းခန်းထဲမှာ အ၀တ်အစား အပြည့်အစုံနဲ့ တွေ့ရတာတောင် သူတို့ ကျောင်းသားတစုက အရမ်းကို စိတ်လာကြ ပစ်မှားနေကြတာ အခုလို အ၀တ်မပါဘဲ တွေ့လိုက်ရတော့ ဖွားဖက်တော် မတ်မတ်ထောင်ပြီး ခုချက်ချင်းဘဲ ရေချိုးခန်း ထဲ ပြေးဝင်သွားပြီး ကိုင်တွယ်ပစ်ချင်မိသွားရသည် ။ ဆရာမကတော့ သူ့ဖွံ့ထွားတဲ့ ရင်သားကြီးနှစ်လုံးကို ဆပ်ပြာနဲ့ ကျကျနန ပွတ်တိုက်နေသည် ။ ဆရာမရဲ့ ရှပ် ချပ်နေတဲ့ ၀မ်းပျင်လေးအောက်က အမွှေးပါးပါး ဖုံးနေတဲ့ မိန်းမအင်္ဂါစပ်ကြီးကို ရဲလွန်း ငေးစိုက်ကြည့်ပြီး သွားရည်ယိုနေသည် ။ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ဆပ်ပြာတိုက်ပြီးတဲ့အခါ ဆရာမသည် တင်ပါးကြီးတွေနဲ့ ပေါင်တန်တွေကြားက အင်္ဂါစပ်ကြီး ကို သေသေချာချာ ပွတ်သပ် ဆေးကြောနေပြန်သည် ။ ရဲလွန်း သည် ဆရာမရဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးကို မြင်ရတဲ့အခါအခွင့်အခါ ကောင်းလို့ကတော့ ဒီအဖုတ်ကြီးကို စုတ်ယက်ပစ်လိုက်အုံးမယ် လို့ ကာမစိတ် ဖုံးနေတဲ့ သူ့စိတ်တွေနဲ့ မှန်းဆတွေးတောနေသည် ။ ချောင်းကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ပုဆိုးကို ဖြေချပြီး လိင်တန်ကို ရှေ့နဲ့နောက် တအား ပွတ်တိုက်နေသည် ။ ဆရာမ ရေချိုးပြီးလို့ ထမိန်ကို ပြန်ရင်လျားလိုက်တဲ့အခါ ရဲလွန်းလည်း အပြင်ခန်းကို ပြန်ပြေးထွက်သွားပြီး စားပွဲမှာ စာဖတ်ချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်သည် ။ မကြာခင် ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် ပြန်ထွက်လာပြီး ရဲလွန်းကို စာသင်သည် ။ ရဲလွန်းသည် စာထဲမှာ စိတ်မ၀င်စားဘဲ ဆရာမရဲ့ဖွံ့ထွားလုံးဝန်းတဲ့ ရင်စိုင်နှစ်မွှာကိုဘဲ ခိုးကြည့်ကာ စိတ်တွေက ဆရာမကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကာမစပ်ယှက်ဖို့ဘဲ တွေးတောနေမိသည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် ကတော့ ရဲလွန်းကို စေတနာ ထားပြီး ကြိုးစား သင်ပေးနေသည် ။ ရဲလွန်းကတော့ ဖွားဖက်တော် မာထောင်ပြီး တဏှာစိတ်တွေဘဲ များနေသည် ။ ဆရာမဆီက အပြန်မှာ ဆေးခြောက်ရှူဖို့နဲ့ အိမ်ဘေးက ဒေါ်ထားထားညွန့်နဲ့ တချီတပွဲလောက် ဆွဲလိုက်ဖို့ကို တွေးတောနေသည် ။
“ ရဲလွန်း…..ဘာငေးနေတာလဲ..မင်းကလဲ ဆရာမ စာသင်ပေးနေတာကို စိတ် လုံးလုံး မ၀င်စားဘူးကွယ်…..ဟင်း…မင်း နဲ့တော့ ခက်တော့တာဘဲကွယ်……” ဆရာမ က ရဲလွန်း တယောက် စာထဲကို စိတ်မ၀င်စားတာကို တွေ့ရလို့ စိတ်ပျက်သွားသည် ။ “ အင်း….ဒီအတိုင်းဆိုရင် မင်းကို ဆရာမ အိမ်ကို ခေါ်ပြီး စာသင်လည်း မင်း စိတ်မပါရင် ဘာမှ အကျိုး ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးကွာ….မင်း မသင်ချင်ရင်လည်း ဆရာမ တခြား သင်ချင်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ဦးစားပေး သင်ပေးလိုက်ရမလား….” ဒီလို ဆရာမ ပြောလိုက်တော့လည်း ရဲလွန်း ကြောက်သွားသည် ။ ဆရာမနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် မနေရမှာကို ကြောက်သည် ။ ဆရာမ အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ရလို့ ဆရာမ ရေချိုးနေတာကို နီးကက် တုံးလုံးကြီး တွေ့လိုက်ရတယ် မဟုတ်လား ။ “ ကျ..ကျနော်….ကြိုးစားပါမယ် ဆရာမ….ကျနော့်ကို သင်ပေးပါ….” “ အေးလေ….မင်း ကြိုးစားမယ် ဆိုရင်လည်း ဆရာမက သင်ပေးချင်ပါတယ်..ရဲလွန်းရယ်…..” ဆရာမရဲ့ လည်ဟိုက် ဘလောက်စ် အင်္ကျီထဲက လှုပ်တုပ်တုပ် ရင်သားလုံးကြီးတွေကို မသိမသာ ခိုးကြည့်နေရတာကိုက ရဲလွန်း အတွက် ဖီလင်ပါ ။ ဆရာမရဲ့ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံး ကိုယ်တွေကိုပြန် မြင်ယောင်နေမိပြီး သူ့လိင်တန်က တန်းတန်းမတ်မတ် ထောင်နေသည် ။ ဆရာမကို ဒေါ်ထားထားညွန့်ကြီးကို တွယ်သလို တွယ်ချင်နေတာတော့ အရမ်းပေါ့ ။ ဆရာမ အိမ်က အပြန်မှာ သူတို့ ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးခြောက်ရောင်းတဲ့ မွတ်တားဘိုင် ဆီက ဆေးခြောက်ထုပ် အကြွေး ၀င်ဝယ်ပြီး အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့သည် ။ အိမ်မှာ အဖေရော အမေရော မရှိကြဘူး ။ တဖက်အိမ်က ဒေါ်ထားထားညွန့် ရှိနေလား ဆိုတာကို လေ့လာလိုက်သည် ။ စော်ကြီး ရှိနေရင် နည်းနည်း ပွတ်သီးပွတ်သပ် သွား လုပ်လိုက်ပြီး တက်ဖြုတ်မလို့ ။ အိမ်အနောက်ဖက်ကနေ ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အိမ်ထဲကို သူ ခြေသံမကြားအောင် ခြေဖေါ့နင်းပြီး တံခါးကို အသာလေး တွန်းဖွင့်ပြီး ၀င်လိုက်သည် ။ ခါတိုင်းလည်း သူ ဒီလိုဘဲ ၀င်နေကျမို့ ။ အိမ်ထဲကို ရောက်ပြီး စော်ကြီး ရဲ့ အိပ်ခန်းလေးဆီကို သူ လှမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အိပ်ခန်းထဲက အသံဗလံတွေကြောင့် ရဲလွန်း ခြေလှမ်းတွေ တန့်သွားသည် ။ “ အိုး…အိုး……အား…အား…အား…….အားရှီး…..ရှူး….အား………” ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေ နဲ့ အသားချင်း ၇ိုက်ခတ်တဲ့ အသံတွေ…ဖပ်ဖပ်ဖပ်..ဖပ်ဖပ်ဖပ်…….တနည်းအားဖြင့် ကုတင်သံ လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမတို့ ကာမစပ်ယှက်ကြတဲ့အသံဗလံတွေ …။ ဟာ..စော်ကြီး တယောက်ယောက်နဲ့ လိုးနေတယ်…….ဘယ်…ဘယ်…ဘယ်သူများပါလိမ့်……..။ ရဲလွန်း တအား သိချင်သွားသည် ။ ခြေဖျားထောက်ပြီး ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အိပ်ခန်းလေး အနားကို ချဉ်းကပ်သွားပြီး အထဲကို မြင်နိုင်ဖို့ ချောင်းကြည့်စရာ အပေါက် ရှာလိုက်သည် ။ ဟောင်းနွမ်း စုတ်ခြာနေတဲ့ သုံးထပ်သား ထရံလေးမှာ သံပေါက်ရာ အဟောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေသည် ။ ရဲလွန်း အထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။
ဒေါ်ထားထားညွန့်သည် သူချောင်းကြည့်နေတဲ့ဖက်ကို မျက်နှာမူထားသည် ။ တက်လိုးနေတဲ့လူက ကျောခိုင်းထားသည် ..။ သူ့မျက်နှာကို မမြင်ရပေမယ့်သူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကို ရဲလွန်း သိသည် ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူသည် ရဲလွန်းရဲ့ အဖေ ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါဘဲ ။ အဖေသည် ဒေါ်ထားထားညွန့်ကြီးကို ရေရေလည်လည် လိုးဆောင့်နေသည် ။ အားနဲ့မာန်နဲ့ ဆောင့်ထည့်နေတာ ။ စော်ကြီးကလည်း အဖေ လိုးနေတာကို အရမ်း သဘောကျ ကြိုက်နေတဲ့ ပုံ ရှိသည် ။ ရဲလွန်းလည်း အဖေ့ လီးကြီး တစွပ်စွပ်နဲ့ စော်ကြီးရဲ့ ပြဲအာနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို ၀င်ထွက်နေတာကို တော်တော်ကြာ ငေးကြည့်နေပြီး တောင်လာတဲ့ သူ့လိင်တန်ကို ကွင်းတိုက် ပါတော့သည် ။ အိပ်ခန်းထဲက ဒေါ်ထားထားညွန့်နဲ့ သူ့အဖေသည် ပုံစံ တမျိုး ပြောင်းပြီး ဆွဲနေကြပြန်သည် ။ ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ ကုန်းထားတဲ့ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးတွေ ကြားထဲက ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို ဆက်တိုက် ထိုးသွင်းနေတဲ့ အဖေ့လီးတန်ကြီးကို ကြည့်လိုက် ဒေါ်ထားထားညျွန့်ရဲ့ နို့ကြီးတွေကို ကြည့်လိုက်နဲ့ တအား ထုပစ်လိုက်တာ တအားကောင်းသွားသည် ။ သုတ်ရည်တွေကို နံရံကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ရဲလွန်း နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်လိုက်သည် ။ ခြေဖေါ့နင်းပြီး အိမ်အနောက်ဖက်ကနေ ပြန်ထွက်လိုက်သည် ။ ဒီည စော်ကြီးကို အပြတ်နှိပ်မယ် မှန်းထားတာ အဖေ ၀င်အုပ်နေလို့ ကွင်းနဲ့ဘဲ ကျေနပ်လိုက်ရသည် ။ အိမ်အနောက်ဖက်က သရက်ပင်ကြီးရဲ့ အောက်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ရင်း မာမွတ်ဘိုင် ဆီက ၀ယ်လာတဲ့ ဆေးခြောက်ထုပ်လေးကို ထုတ်ယူလိုက်သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်သည် ကျောက်သင်ပုံးမှာ မြေဖြူနဲ့ စာရေးနေသည် ။ ဆရာမရဲ့ ခါးသေးသေးလေး အောက်က တင်ပါးဝိုင်းဝိုင်းကားကားတွေက အနောက်ကို ကော့လုံးနေကြသည် ။ စာရေးနေတဲ့အချိန် တင်ပါးကြီးတွေက တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေကြသည် ။ သန်းဝေ ရဲလွန်းနဲ့ မင်းထိုက်တို့ သုံးယောက်သည် ရမက်ခိုးတွေ ဝေနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဆရာမရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှတွေကို ငေးကြည့်ရင်း ဆရာမကို စိတ်ကူးနဲ့ အ၀တ်တွေ ချွတ်ခွာကြည့်နေကြသည် ။ သူတို့အထဲမှာ ရဲလွန်းက ဆရာမရဲ့ အတွင်းကိုယ်တွေကို သေသေချာချာ မြင်ဖူးခဲ့သည် ။ ရဲလွန်းသည် ညတုံးက ဆရာမရဲ့ အိမ်မှာ ဆရာမရေချိုးနေတာကို ချောင်းကြည့်ခဲ့ပြီး ဖြူဝင်းစိုပြေ တောင့်တင်းတဲ့ ဆရာမကို ၀တ်လစ်စလစ် မြင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို သန်းဝေကို ပြောပြခဲ့သည် ။
သန်းဝေက ဘယ်ကနေ သိလာသည် မသိ ။ ဆရာမရဲ့ ယောက်ျားသည် နိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် ပြန်မလာတော့လို့ ဆရာမနဲ့ ကွဲသွားတာ ကြာပြီ…ဆရာမသည် ယောက်ျား မရှိလို့ ကာမရာဂစိတ်တွေ ထကြွလိုလားနေမှာ သေချာသည်..ဆရာမ ကို ကြံစည်ရင် အောင်မြင်နိုင်သည် လို့ ရဲလွန်းကို မြှောက်ပင့်ပေးသည် ။ မင်းထိုက်ကိုတော့ သူတို့ မယုံကြည်ကြလို့ ဒီအကြောင်းတွေကို သူတို့ မဆွေးနွေး မတိုင်ပင်ကြဘူး ။ ရဲလွန်းသည် ဆရာမရဲ့ တင်ပါးတွေကို စူးစိုက် ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထကြွ သောင်းကျန်းလာလို့အတူတူ ကပ်ရက် ထိုင်နေတဲ့ သန်းဝေကို လေသံတိုးတိုးနဲ့ “ နှာစာအုပ် ရှိလား…” လို့ မေးလိုက်သည် ။ သန်းဝေကလည်း “ မင်းမေစပ်ပတ်..နှာစာအုပ် ဘာလုပ်ဖို့လဲ…” လို့ ပြန်မေးသည် ။ ရဲလွန်းက “ အိမ်သာထဲ ကွင်းသွားကိုင်မလို့” လို့ ဖြေလိုက်တော့ သန်းဝေလည်း သူ့လွယ်အိတ်ထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့ နှာစာအုပ်ကို ထုတ်ပေးသည် ။ ထိုစဉ်အခါက မြန်မာ အ ပြာစာအုပ်လေးများသည် ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေ ကြားမှ ရေပန်းစား ခဲ့သည် ။ ဗီဒီယို အင်တာနက် မပေါ်သေးတဲ့အချိန်တုံးက ဒီ အပြာစာအုပ်လေးတွေသည် မြန်မာလူငယ်လေးတွေရဲ့ လက်သုံး ဖြစ်ခဲ့သည် ။ သန်းဝေသည် သူ့အိမ်နားက ဈေးကလေးက “ သိန်းသန်းကုဋေစာပေ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်အငှားဆိုင်လေးက ကိုသိန်းရဲ့ဆီက ဒီလို စာအုပ်လေးတွေကို အမြဲငှားဖတ်သည် ။ ကျောင်းကိုလည်း ယူလာပြီး ရဲလွန်းတို့လို ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပေးဖတ်တတ်သည် ။ သန်းဝေဆီက ရတဲ့ အပြာစာအုပ်လေးသည် ၀ါညစ်ဟောင်းနွမ်းလွန်းနေသည် ။ ရဲလွန်းသည် စာအုပ်လေးကို ဗလာစာအုပ်တအုပ်ရဲ့ ကြားထဲ ညှပ်လိုက်ပြီး ဆရာမ စာသင်တာ ပြီးသွားတဲ့အခါ ကျောင်းအိမ်သာထဲ သွားဖတ်ရင်း ကွင်းထုမလို့ အဆင်သင့် ပြင်နေသည် ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမသည် သန်းဝေက ဆီက လှမ်းယူလိုက်တာကို မြင်သွားသည် ။ ရဲလွန်းနဲ့ သန်းဝေ ထိုင်နေတဲ့ဆီကို ဆရာမ လျောက်လာသည် ။ “ ရဲလွန်း…မင်း ဘာ ဖွက်လိုက်တာလဲ..ပြစမ်း…..” “ ဘာမှ မဖွက်ပါဘူး..ဆရာမ…“ “ အံမယ်…မညာနဲ့..ငါ မြင်လိုက်ပါတယ်….” ဆရာမက ရဲလွန်းရဲ့ စားပွဲပေါ်က ဗလာစာအုပ်လေးကို ဖတ်ကနဲ ဆွဲယူကာ လှန်လှောကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အပြာစာအုပ်အစုတ်အနွမ်းလေးကို တွေ့သွားသည် ။ “ ဟင်..ဘာစာအုပ်လေးလဲ…အပြာရောင် မျက်ရည် …ဆိုပါလား….” စာအုပ်ကို လှန်ဖတ်လိုက်သော ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်ရဲ့ ဖြူဝင်းတဲ့ မျက်နှာလေးသည် ရဲတွတ်သွားသည် ။ “ ဟင်…ကြည့်စမ်း…ဒီကောင်လေး…ဒါတွေ ဖတ်နေတယ်….” လို့ တီးတိုး ရေရွတ်လိုက်ပြီး စာအုပ်လေးကို ဂျိုင်းကြားကို ညှပ်လိုက်ပြီး “ ရဲလွန်း..ခုံပေါ် မတ်တပ်ရပ်လိုက်စမ်း….” လို့ ဒေါသသံနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ ရဲလွန်းလည်း ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ မိသွားလို့ ဘာမှ မငြင်းသာတော့ ။ ဆရာမ ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ခုံပေါ်ကို မတ်တပ် ရပ်လိုက်ရသည် ။ ကြီးကောင်ကြီးမားနဲ့ ခုံပေါ်တက် ရပ်ရတဲ့ သူ့ကို အတန်းသားတွေတင်မကဘူး..အတန်းပြင်က ဖြတ်သွားကြတဲ့ တခြားကျောင်းသားတွေကပါ ကြည့်ပြီး ရယ်သွားကြတာကို ခံရသည် ။
ဒီအချိန်မှာ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်သည် ရဲလွန်းဆီက သိမ်းလိုက်တဲ့ အပြာစာအုပ်လေးကို သူမရဲက ခြင်းတောင်းထဲ ကို ပစ်ထည့်လိုက်သည် ။ ရဲလွန်းကို တခုခု ပြောမည် ဆိုပြီး ရဲလွန်းဖက်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန် သန်းဝေက ရဲလွန်းရဲ့ ပုဆိုးကို ရုတ်တရက် ဆွဲချွတ်လိုက်သည် ။ ရဲလွန်းသည် အတွင်းခံဘောင်းဘီ ခံဝတ်လေ့ ရှိသူ မဟုတ်တော့ ပုဆိုး ကျွတ်သွားတဲ့အခါ အ၀တ်မဲ့ ကိုယ်အောက်ပိုင်းက အမွှေးမဲမဲတွေ ကြားထဲက တန်းလန်းတွဲလောင်း ကြီး ကျနေတဲ့ လိင်တန်တုတ်ကြီး..ဂွေးစိနှစ်လုံးတို့ကို ဆရာမ အပါအ၀င် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အားလုံး ထင်းကနဲ ရှင်းကနဲ တွေ့လိုက်ကြရသည် ။ “ ဟင်…..” ဆရာမလည်း “ သန်းဝေ..မင်း ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ..ထစမ်း..မင်းလည်း ခုံပေါ်တက် မတ်တပ်ရပ်လိုက်စမ်း..” လို့လှမ်းငေါက်လိုက်သည် ။ ရဲလွန်းလည်း ပုဆိုးကို ကောက်ပြီး ပြန်ဝတ်လိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ဆရာမ အပါအ၀င်ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကတော့ သူ့လိင်တန်မဲမဲကြီးကို မြင်လိုက်ပြီး ဖြစ်နေသည် ။ ဆရာမသည် ဒေါသထွက်ပြီး သန်းဝေနဲ့ ရဲလွန်းတို့ကို ကြိမ်နဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ တရွှမ်းရွှမ်း ၇ိုက်နှက်သည် ။ ရှက်သွားတာကြောင့်လည်း ဒီလို ရိုက်လိုက်တာ ။ ဒီနေ့ ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ဆရာမသည် ရဲလွန်းကို သူမအိမ်ကို စာသင်ဖို့ မခေါ်တော့ ။ ရဲလွန်းလည်း မျက်နှာ ငယ်လေးနဲ့ သူ့ကိုများ ခေါ်လေမလား လို့ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ ပေစောင်းစောင်း လုပ်နေပေမယ့် ဆရာမက သူ့ကို ကြည့်တောင် မကြည့်တော့ ။ ကျောင်းဆင်းခါနီး ဆရာမက “ မင်းထိုက်…” လို့ ခေါ်လိုက်လို့ ရဲလွန်းနဲ့ သန်းဝေတို့သည် ခုံပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရက်က မင်းထိုက်ဖက်ကို ကြည့်လိုက်ကြသည် ။ “ ဗျာ….ဆရာမ …. ” မင်းထိုက်က လူရိုးသားလေးလို အသံညှောင်နာနာလေးနဲ့ ထူးလိုက်သည် ။ “ မင်း..ဒီနေ့ ဆရာမအိမ်ကို လိုက်ခဲ့..မင်းကို စာသင်ပေးချင်တယ်…” လို့ ဆရာမက ပြောလိုက်တဲ့အခါ မင်းထိုက်သည် ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ “ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ…” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တာကို ရဲလွန်းနဲ့ သန်းဝေတို့ စိတ်ပျက်စွာနဲ့ တွေ့လိုက် ကြားလိုက်ကြရသည် ။မင်းထိုက်သည် ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်ရဲ့ ခြင်းတောင်းလေးကို ဆွဲပြီး ဆရာမနဲ့အတူ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ ရပ်စောင့် နေတာကို ခပ်ဝေးဝေးကနေ ရဲလွန်းနဲ့ သန်းဝေတို့ လှမ်းမြင်နေရသည် ။ သန်းဝေက “ မင့်မေစပ်ပတ် ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ ကို ထပ်ခါတလဲလဲ သုံးရင်း ရဲလွန်းကို အပြစ်တင်နေသည်။ “ မင်းစောက်သုံးမကျလို့ ဆရာမက ဟိုကောင်ကြီးကို ခေါ်သွားပြီ …မင်း ပါးစပ်ထဲ ရောက်ခါနီး ဖြစ်နေတဲ့ ကိတ်မုန့်တုံးကြီး သဲထဲကို ပြုတ်ကျသွားတာဘဲ ရဲလွန်း….မင်း စောက်သုံးကို မကျဘူး..မင်းလက်ထဲမှာ နှာစာအုပ် တွေ့သွားတော့ ဆရာမက မင်းကို လန့်သွားတာ နေမှာပေါ့…စောက်ရူးရဲ့….” “ ဟာ..မသိပါဘူးဗျာ…ခင်ဗျားကလည်း ညစ်နေရတဲ့ကြားထဲ စောက်ပစ်လာတင်နေတယ်…ဟင်း..” “ ဟော..မင်းထိုက်နဲ့ ဆရာမ ဘတ်စကားပေါ် တက်နေကြပြီ …. ” ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်သည် ရဲလွန်းလိုဘဲ မင်းထိုက်ကို သူနဲ့ အိမ်ကို ခေါ်ခဲ့တော့ မင်းထိုက်သည် ရဲလွန်းထက် အ သက်လည်းကြီး ကိုယ်လုံးလည်း ကြီးလို့ သူနဲ့ ဘတ်စ်စကားထဲ ပူးပူးကပ်ကပ် စီးကြရတဲ့အခါ ရင်ဖိုသလိုလို ဖြစ်မိနေသည် ။
မင်းထိုက်သည် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဖြစ်လိုတာကြောင့် ၀ိတ်မတဲ့အတွက် လက်မောင်းအိုး တုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကားကားကြီးကြီး ကိုယ်အောက်ပိုင်း သေးသေးနဲ့ ရင်ဖိုစရာ လူငယ်တယောက် မဟုတ်လား ။ ဒီကြားထဲ့ ကားက ကြပ်တော့ မင်းထိုက်နဲ့ ဆရာမတို့ တအား ပူးကပ်မိနေရတဲ့အခါ ဆရာမရဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက မင်းထိုက်ရဲ့ ကိုယ် အရှေ့ပိုင်းနဲ့ တအားပူးကပ်မိနေကြသည် ။ မင်းထိုက်သည် အားကစားသမား တယောက်မို့ ရဲလွန်းလို အမြဲ ကွင်းတိုက်တဲ့ကောင် မဟုတ်တော့အားတွေ ပြည့်နေတာကြောင့် ဆရာမရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ဖိထောက်မိတဲ့အခါ ဖွားဖက်တော် လိင်ချောင်းက ချက်ချင်းဘဲ ထထောင်လာတော့သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်လည်း မာတောင့်တဲ့ မင်းထိုက်ရဲ့ အတန်ကြီးက တင်ပါးကြားတည့်တည့်ကို လာထောက်မိနေတာကို သတိပြုမိလိုက်သည် ။ ဒီကောင့်ကို ခေါ်လာမိတာ မှားများ မှားသွားပြီလား လို့ ဒေါ်မြမြနွယ် ဖျတ်ကနဲ ခေါင်းထဲမှာ တွေးလိုက်မိသည် ။ ဒီကောင်က ရဲလွန်းလို ပိန်ညောင်ညောင် ချာတိတ် မဟုတ်ဘဲ အတန်း ခဏခဏ ကျထားတဲ့ ကျောင်းသားကြီး ဖြစ်နေသည် ။ ဒေါ်မြမြနွယ်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း လို့ ထင်ရလောက်အောင် လူကောင်ကလည်း ကြီးသည် ။ အသားဖွေးဖွေး..ဆံပင်ပုံဆန်းနဲ့ မင်းသား ရန်အောင်လိုလို ဒီဇိုင်းမျိုး ..။ ဒီအချိန်မှာ ဘတ်စ်ကားကလည်း အရှေ့က ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်တဲ့ ကားတစီးကြောင့် ဘရိတ် တအားအုပ်လိုက် ရတော့ မတ်တပ်ရပ် လိုက်ပါလာကြတဲ့လူတွေလည်း ရုတ်ရုတ်သဲသဲတွေ ဖြစ်ကုန်သည် ။ မင်းထိုက်လည်း သူ့ေ၇ှ့က ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်ရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ဖွားဖက်တော်နဲ့ တအားဖိဆောင့်လိုက်မိသည် ။ “ အို…..” တုတ်တုတ်မာမာကြီးရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ဆရာမ အရမ်း ရင်ခုံသွားသည် ။ ကြက်သီးတွေ ထသွားသည် ။ “ ဒီကောင်..ကလေးသာသာ မဟုတ်ဘူး….လီးအကြီးစားနဲ့ ကောင်…” ဆိုတဲ့ အတွေးက ဒေါ်မြမြနွယ်ကို ရင်တုန်စေသည် ။ လင်ကလည်း အင်္ဂလန်က အဖြူမနဲ့ ညိပြီး ပြန်မလာတော့တာ နှစ်တွေ ကြာခဲ့ပြီ ။ ဒေါ်မြမြနွယ်လည်း လိင်စပ် ယှက်တာနဲ့ ကင်းဝေးခဲ့ရတာ ကြာလှပြီ ဆိုတော့ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့ကို မသိစိတ်မှာ လိုလားနေမိတာကို သူမကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိ ။ အခုလို လိင်တန်မာမာတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ဖိထောက်ထားတာ ကို ခံရတော့ မီးခဲပြာဖုံး ဖြစ်နေတဲ့ သူမကာမစိတ်တွေက ရုတ်တရက် ဘွားကနဲ ပေါ်လာရသည် ။ ဒီလိုကောင်ထွားကြီးရဲ့ လီးတုတ်တုတ်နဲ့များ ခံလိုက်လို့ကတော့ တအားကို ကောင်းမှာဘဲ လို့ ဒေါ်မြမြနွယ် စဉ်း စာမိလိုက်သည် ။ ချက်ချင်းဘဲ “ အို…ငါ့ရဲ့ ဂုဏ်နဲ့ အိနြေ္ဒရေ ကို ထိခိုက်စေမယ့် အလုပ်မျိုးကို ငါ သတိထားရှောင်ကြဉ်ရမယ် ” လို့ သတိရလိုက်သည် ။ အိမ်နားက ကားမှတ်တိုင်ကို ရောက်လို့ ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ကြတော့ ပုဆိုးရှေ့မှာ ငေါငေါကြီး လီးတောင်နေ တဲ့ မင်းထိုက်ကို ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်က မျက်စိလျင်လျင်နဲ့ တွေ့လိုက်သည် ။ မင်းထိုက်က သူကိုင်ထားတဲ့ ဆရာမရဲ့ ခြင်းတောင်းနဲ့ ကွယ်လိုက်သည် ။ ဒါကိုလည်း ဆရာမ ဒေါ်မြမြနွယ်က သိလိုက်သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်သွားကြပြီ ။ ဆရာမကော မင်းထိုက်ကော ရင်တွေ အခုံမြန်နေကြသည် ။ မင်းထိုက်သည် ဆရာမ စာသင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆရာမရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး နှာစိတ်တွေ ပွားများ နေခဲ့ရင်း လူသူမရှိတဲ့ နေရာမှာသာ ဆရာမနဲ့ နှစ်ယောက်ချင်း တွေ့လိုက်လို့ကတော့ ကျင့်ပြီဘဲ လို့ သန်းဝေတို့ ရဲလွန်းတို့ကို ပြောဆိုခဲ့ပေသည် ။ အခု သူ ပြောခဲ့သလိုဘဲ သူနဲ့ ဆရာမတို့ နှစ် ယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့ နေရာကို ရောက်နေကြပြီ ။ တကယ်တမ်း ကျတော့လည်း ပြောခဲ့သလောက် သူ မလုပ်ရဲ ။ ဆရာမ တချက်ငေါက်လိုက်ရင် ဒူးတုန်သွားသည် ။
အတန်းထဲမှာ သူတို့တတွေ ဆရာမ ဖင်ကို ကြည့်ပြီး နှာစိတ် ပွားနေကြတာကို သူတို့နဲ့ လားလားမှ မဆိုင်အောင် လိမ္မာတဲ့ စာကြိုးစားတဲ့ အတန်းခေါင်းဆောင် ကျောင်းသား စိုးနိုင် နားစွန်နားဖျားနဲ့ ကြားသွားခဲ့တဲ့အခါ “ မင်းတို့ ဆရာကို ပစ်မှားရင် ကံကြီးထိုက်မယ်ကွ..” လို့ ခပ်စွာစွာနဲ့ ပြောသွားခဲ့တာကိုလည်း ပြန်ကြားယောင်သည် ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမနဲ့ ထမင်းစား စားပွဲဝိုင်းလေးမှာ နှစ်ယောက် အတူတူ ထိုင်ပြီး စာသင်ရတဲ့အချိန် ဆရာမရဲ့ အိမ်နေရင်းဝတ် ဘလောက်စ် ထဲက ရင်သား ထွားထွားတွေကို ခိုးကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထန်လာပြန်သည် ။ ဆရာမက ကော်ဖီထဖျော်တဲ့အချိန် ဆရာမရဲ့ တင်ပါးတွေကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျောင်းခန်းထဲမှာ မြင်ရ တာထက် ပို ကောင်းနေတာကို သတိထားမိသည် ။ ဆရာမသည် ကျောင်းခန်းထဲမှာ ကျောင်းစိမ်းလုံချည် ၀တ်ထားပြီး အတွင်းခံစကပ်တထည် ခံဝတ်ထားတာကြောင့် တင်ပါးတွေက သိပ်မပေါ်လွင်လှသေး ။ ယခု အိမ်မှာ ညပိုင်းထမိန်နွမ်း ပါးပါး ကို တထပ်ထဲ ၀တ်ထားတာကြောင့် ဆရာမရဲ့ တင်ပါးအိအိကြီးတွေ က ပို သိသာ လှပနေတယ်လို့ သူ ထင်သည် ။ ထောင်လာတဲ့ သူ့ဖွားဖက်တော်က တော်တော်နဲ့ ပြန်မကျလို့ ဒီကောင့်ကို အိမ်သာထဲသွားပြီး အပူငြိမ်းပေးလိုက မှ ဖြစ်မယ် ဆိုပြီး ဆရာမကို ခွင့်တောင်းပြီး စာသင်နေတဲ့ စားပွဲနဲ့ သိပ်မဝေးလှတဲ့ အိမ်သာခန်းထဲကို ၀င်လိုက်သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်လည်း မင်းထိုက် အိမ်သာ ၀င်နေတဲ့အချိန် ရဲလွန်းကို ပထမ သတိရ..ဆက်တိုက်ဘဲ ရဲလွန်းဆီ က အပြာစာအုပ်လေး သိမ်းလာတာကို အမှတ်ရလိုက်သည် ။ ခြင်းတောင်းထဲကို ပစ်ထည့်ခဲ့တာကိုလည်း သတိရလိုက်သည် ။ ခြင်းတောင်းသည် အခု မင်းထိုက်ကို စာသင်နေတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာဘဲ ရှိနေတာမို့ ဆွဲယူလိုက်ပြီး အထဲက အပြာစာအုပ်လေးကို နှိုက်ယူလိုက်သည် ။ ဟင်..နံမည်ကလည်း….ဆရာမကိုဘဲ……တဲ့ ။ ဟွန်း..ဒီကောင်တွေ..ငါ့ကို ပြစ်မှားနေကြတာလား..ဖတ်တာကိုက ဆရာမ ဇာတ်လမ်း …။ ဒေါ်မြမြနွယ်လည်း အပြာစာအုပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်သည် ။ ဇာတ်လမ်းက ကျောင်းသားလေးတယောက်နဲ့ ဆရာမတို့ ညိစွန်းသွားကြတာကို တစ်တစ်ခွခွ စကားလုံးတွေနဲ့ ကာမစိတ် ထကြွအောင် ရေးသားထားတဲ့ အပြာဇာတ်လမ်း ။ အစက ဘာလည်း သိရုံ ဖတ်ကြည့်မလို့ ။ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်နဲ့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင်လာသလို စိတ်တွေလည်း ထကြွလာလို့ မင်းထိုက်ကလည်း အိမ်သာထဲမှာ ကြာနေလို့ ဆက်ပြီး ဖတ်လိုက်မိသည် ။ အိမ်သာထဲ ရောက်သွားတဲ့ မင်းထိုက်သည် ဆရာမရဲ့ ဖင်ကြီးတွေ နို့ကြီးတွေကို မြင်ယောင်သလို ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ဆရာမရဲ့ ဖင်ကြီးတွေကို ထောက်မိရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်စဉ်းစားမိပြီး သူ့ဖွားဖက်တော်ကို လက်နဲ့ ကွင်းတိုက်နေသည် ။ စိတ်ကူးနဲ့ မြင်ယောင်ရတာနဲ့တင် အားမရတော့ဘဲ ဆရာမကို မျက်လုံးနဲ့ မြင်ချင်မိလို့ အိမ်သာတံခါးကို နည်း နည်းလေး ဟလိုက်ပြီး စားပွဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ ဆရာမကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ။ လက်ကလည်း လိင်တန်ကို ဖိ ထုနေသည် ။ “ ဟင်…ဆရာမ ဘာစာအုပ်လေး ဖတ်နေတာလဲ…” မင်းထိုက် ချက်ချင်းဘဲ သိလိုက်သည် ။ ဟင်…ဒါ…ဒါ……ဒါ….အပြာစာအုပ်လေးဘဲ…..။ဟာ…ဆရာမ ဒါ…ဒါတွေ… ဖတ်တယ် . . .။ မင်းထိုက် ကြည့်နေတုံးမှာဘဲ ဆရာမသည် စာအုပ်လေးကို ဖတ်နေရင်း လက်တဖက်က ပေါင်ကြားထဲကို ရောက်သွားသည် ။ ကြည့်ရတာ ဆရာမ စိတ်ထလာတဲ့ပုံ ရှိသည် ။
မင်းထိုက်လည်း ဒါကို ကြည့်ပြီး တအား တိုက်ပစ်လိုက်တာ သုတ်ရည်တွေ ဖွားကနဲ ဖွားကနဲ လိင်တန်ထဲကနေ ပန်းထွက်ကုန်သည် ။ အိမ်သာရဲ့ တံခါးကို ထိမှန်ကုန်သည် ။ ဒေါ်မြမြနွယ်သည် အပြာစာအုပ်ကို ဖတ်လိုက်မိလို့ ကာမစိတ်ရိုင်းတွေ ထကြွလာရသည် ။ ဒီအချိန်မှာ ခြောက် ဆိုတဲ့ အိမ်သာတံခါး ပွင့်သံကြောင့် ချက်ချင်းဘဲ စာအုပ်လေးကို ခြင်းတောင်းထဲကို ပြန်ထည့်လိုက်မိသည် ။ မင်းထိုက် စားပွဲကို ပြန်ရောက်လာသည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်ကတော့ ဘာမှ မဖြစ်သလိုနဲ့ သူ့ကို စာဆက်သင်ပေးသည် ။ ဆရာမရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ စောစောက အပြာဇာတ်လမ်းထဲက ဆရာမနဲ့ ကျောင်းသား ကာမစပ်ယှက်ကြတာတွေကို ပြန် စဉ်းစား သတိရမိနေသည် ။ စိတ်ကို ထိန်း…စိတ်ကိုတင်း…မြမြနွယ်…နင်ဟာ ကျောင်းဆရာမ တယောက် ။ ဒီလို စိတ်တွေ ပေါ်ရင်တောင် ထိန်းနိုင်ရမယ်….။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးရင်း စာသင်တာကိုလည်း စောစော သိမ်းလိုက်သည် ။ ဖြတ်လိုက်သည် ။ “ ကဲ မင်းထိုက်ရေ..ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ဘဲကွာ….နောက်နေ့တွေ ဆက်ကြတာပေါ့…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ မင်းထိုက် ပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန် ထမိန်ကို ပြင်ဝတ်လိုက်တဲ့အခါ ထမိန် အနောက်ဖက်မှာ အရည်ကွက်ကြီးတကွက် စိုပေစွန်းနေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ အိမ်သာထဲကို ၀င်ပြီး သေသေချာချာ ကြည့်မလို့ အိမ်သာဆီကို လျောက်လှမ်းလိုက်သည် ။ “ ငါ့ထမိန် အခုလို ကွက်သွားတာ မင်းထိုက် တယောက်များ မြင်သွားခဲ့သလား…” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အထပ်ထပ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးမိသည် ။ အိမ်သာထဲမှာ ပေပွနေတဲ့ ပေါင်ကြားဂွဆုံနေရာကို သန့်စင်ရင်း အိမ်သာတံခါး အတွင်းဖက်က သုတ်ရည်တွေကို ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် မြင်လိုက်ပြီ ။ “ဟယ်….ဟိုကောင်..ယုတ်မာသွားတယ်……အို….ကွင်းထုသွားတာ….များလိုက်တဲ့ သုတ်တွေ….” ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် လည်း မင်းထိုက်နဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ အိမ်မှာ စာသင်ရတာကို စိတ်မလုံ ကျောချမ်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မယုံလို့ နောင်ကို မင်းထိုက်ကို တယောက်ထဲ အိမ်ခေါ်မလာတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည် ။ ဒေါ်မြမြနွယ် တယောက် အိပ်ရာထဲကို ရောက်တဲ့အချိန် ရဲလွန်း ပုဆိုးကျွတ်သွားတဲ့အချိန် မြင်လိုက်ရတဲ့ သူ့အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ထွားရှည်လွန်းတဲ့ လိင်တန်ကြီးကို မြင်ယောင်လိုက် အပြာစာအုပ်လေးထဲက ကျောင်းသားက ဆရာမကို အတင်းကြမ်းတဲ့ စာသားတွေကို မြင်ယောင်လိုက် မင်းထိုက် အနောက်က ထောက်ထားတဲ့ လိင် တန်မာမာကြီးကို ပြန်သတိရလိုက်နဲ့ အိပ်လို့ မပျော်ဘူး ။ လင် မရှိတာ ကြာတဲ့အတွက် ပြတ်လပ် ကင်းဝေးနေတဲ့ ယောက်ျားရဲ့ အထိအတွေ့ အကိုင်အတွယ်တွေကို တမ်းတ တောင့်တမိနေသည် ။ အိပ်လို့ မရတာနဲ့ မီးထဖွင့်ပြီး ခြင်းတောင်းထဲက အပြာစာအုပ်လေးကို ပြန်သွားယူမိပြန်သည် ။ ကုတင်ပေါ်မှာ ဖွင့်ဖတ်ရင်း ပြင်းပြလာတဲ့ စိတ်အစဉ်ကြောင့် အပျိုပေါက် အရွယ်က စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ လက်နဲ့ ပွတ်ပြီး အာသာဖြေတာကို လုပ်မိသည် ။ စိတ်ကူးထဲမှာ ယောက်ျားတယောက်က ကိုယ့်ကို ကာမစပ်ယှက်သည်လို့ တွေးရင်း ပွတ်တော့ တပည့်တွေ ဖြစ်တဲ့ ရဲလွန်း…မင်းထိုက် တို့ကို စိတ်ကူးယဉ်မိသည် ။
ပွတ်…ပွတ်..ပွတ်…အိုး……အိုး…….အား…….အား……..လက်ချောင်းတွေက အင်္ဂါစပ်ထဲကို ကျွံဝင်သွားကြသည် ။ အင်း……..အ…….အ………..အ…….။ အစိကို လက်ချောင်း နှစ်ချောင်းပူးနဲ့ ချေရင်း အရည်တွေ စိုစိုရွှဲလို့ ဒေါ်မြမြနွယ် တယောက် ကာမအထွဋ်အထိပ် ကို ရောက်ရှိသွားရသည် ။ မနက်စောစော ။ ကျောင်းရဲ့ အနောက်ဖက်က ကုက္ကိုပင်ကြီးရဲ့ အကွယ်မှာ သန်းဝေ စီးကရက် သောက်နေသည် ။ ကျောင်းစောင့်ကြီး ဦးစိန်လုံး တွေ့သွားရင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကို သွားတိုင်တတ်လို့ သူမတွေ့အောင် သစ်ပင်ကွယ်ပြီး သောက်နေတာ ဖြစ်သည် ။ သန်းဝေသည် သူ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် သူ့မှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စရိုက်တွေ ရှိနေသည် လို့ မင်းထိုက်က တခါက ပြောဘူးသည် ။ သန်းဝေက ဒါကို ပြန်ကြားတော့ မင်းထိုက်ကို မိုးမွှန်နေအောင် ဆဲသည် ။ သန်းဝေနဲ့ မင်းထိုက်တို့ အကြာကြီး စကား မပြောကြတော့ ။ နောက်ပိုင်းမှာ မင်းထိုက်က ဆေးခြောက် လိုချင်သလို အပြာစာအုပ်လည်း ဖတ်ချင်တော့ သန်းဝေကို ပြန်ပြီး ချော့သည် ။ သန်းဝေကလည်း ရိုင်းစိုင်း ပေမယ့် သဘောကောင်းသည် ။ အပေါင်းအသင်း ခင်သည် ။ မင်းထိုက်နဲ့ ပြန်ဆက်ဆံသည် ။ “ ဟေ့..သန်းဝေ…..” ရုတ်တရက် မင်းထိုက် ခေါ်လိုက်လို့ သန်းဝေ လန့်သွားသည် ။ “ မင်းမေစပ်ပတ်…” “ သန်းဝေ..မင်းကို အရေးတကြီး ပြောပြစရာ ရှိလို့ကွ….” “ ဟေ..ဘာဖြစ်လဲ..မင်းဖင်ကို ညက တယောက်ယောက် တက်ဖွင့်သွားလား….” “ ဟာ…မင်း မမိုက်ရိုင်းနဲ့ကွာ….မင်းကို ခင်လို့ ပြောပြမိလို့..မင်း နားမထောင်ချင်ရင်လည်း ရတယ်…မပြောတော့ဘူး….” “ ဟာ..မင်းထိုက်..အဲလို မလုပ်နဲ့ကွာ..ငါက နောက်တာပါ…..” သန်းဝေက စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း စီးကရက်ကို တအား ရှိုက်လိုက်သည် ။ မင်းထိုက်က စီးကရက် တလိပ် တောင်းသောက်ရင်း “ ညက ဆရာမအိမ်ကို ငါ စာသင်ဖို့ လိုက်သွားတယ်ကွ…” လို့ စပြောလိုက်သည် ။ သန်းဝေက “ ကြွားမနေနဲ့ကွာ…ငါ သိတယ်….မင်းက စောက်ကြောက်….မင်း ဆရာမ အနံ့ကို ရှူနေရတာနဲ့ဘဲ ကျေနပ်နေတာ မဟုတ်လား….” လို့ မဲ့ရွဲ့ပြီး ပြောလိုက်သည် ။ မင်းထိုက်က “ သန်းဝေ …ငါ အရေးကြီးတဲ့ သတင်း ပြောမလို့ ..ခဏ ပါးစပ်ပေါက်ကို ဆို့ထားကွာ….” လို့ မျက်နှာထား တင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ သန်းဝေလည်း မင်းထိုက် ပြောပြတဲ့ ဆရာမက ရဲလွန်းဆီ သိမ်းသွားတဲ့ နှာစာအုပ်ကို ဖတ်နေတယ် ဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ မျက်လုံးကြီး ပြူးသွားသည် ။ ဒီစာအုပ်သည် သူ ယူလာတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်သည် ။ ဒီနေ့တောင် တအုပ် ယူလာသေးသည် ။ ဒီနေ့ ယူလာတဲ့စာအုပ်က ပုံတွေပါ ပါလို့ ရဲလွန်းတို့ကို ပြမလို့ ယူခဲ့တာ ။ “ ဟာ..ဒါဆို ဆရာမက ဒီဟာတွေကို စိတ်ဝင်စားနေတာဘဲကွ…..ငါ ထင်တာ မှန်နေပြီ..သူ့ဘဲကြီး ပြန်မလာတော့လို့ဆရာမ နှာစိတ်တွေ ကြွနေပြီ ဆိုတာ သေချာပြီဟေ့….” မင်းထိုက်က “ ဟုတ်တယ်..ငါလည်း ထင်တယ်…မနေ့ညက အဲ့စာအုပ် ဖတ်ပြီးတဲ့ အချိန် …ဆရာမရဲ့ နှာတန်ဖျားတွေနဲ့ ပါးတွေ နီရဲနေတယ်….ငါလည်း ဆရာမရဲ့ အိမ်သာထဲ ကွင်းတချီ ထုခဲ့တယ်…..” “ ဘာ….စောက်ရူး….ဘာလုပ်တာလဲ..မင်းကလဲ..စောက်ပေါ မင်းထိုက်……” သန်းဝေ ဆဲတာတွေကို မင်းထိုက်က သွားဖြီးပြီး ခံနေသည် ။
ကျောင်းခေါင်းလောင်းသံကြောင့် သန်းဝေနဲ့ မင်းထိုက်တို့ သစ်ပင်ကွယ်ကနေ ထွက်လာကြသည် ။ ကျောင်းဆီကို လျောက်သွားကြတဲ့ အချိန် ရဲလွန်း လာနေတာ တွေ့ကြရလို့ သူ့ကို ရပ်စောင့်ကြသည် ။ ရဲလွန်းက မျက်နှာ ပျက်နေသည် ။ သန်းဝေက “ ဟေ့ကောင်…ရဲလွန်း….ဘာဖြစ်နေလဲ မင့်စောက်ခွက်က..မင်း ဖင်ကို သူများ တက်ချသွားလား…” လို့ ပြောလိုက်တော့ ရဲလွန်းက “ လီးဘဲ သန်းဝေ…….မင်းဖင်ကို မင်းပြန်လိုးလိုက်..စောက်ပတ်….” လို့ ဆဲလိုက်ပြီးကျောင်းထဲကို မ၀င်သေးဘဲ ဘော်လုံးကွင်းဖက်ကို ချော်ထွက်သွားလို့ သန်းဝေက လိုက်ခေါ်သည် ။ ရဲလွန်းက “ သန်းဝေ..မင်း ဘာကြောင့် မင်းထိုက်နဲ့ ပေါင်းတာလဲ..ဒီကောင်က သစ္စာဖေါက်..ထွတ်..မနေ့ညက သူ ဆရာမအိမ်ကို ပါသွားတယ်ကွ..မင်း မေ့နေလား….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သန်းဝေကလည်း “ ရဲလွန်း..မင်း မနာလို ဖြစ်မနေနဲ့..သူ့ဆီက သတင်းထူးတခု ရလိုက်တယ်ကွ..မင်းဆီက သိမ်းသွားတဲ့ နှာစာအုပ်ကို ဆရာမ ဖတ်နေ တာ သူ တွေ့တယ် တဲ့…..”လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ “ ဟင်…..ဆရာမ….ဖတ်တယ်…ဟုတ်လား……” ရဲလွန်း အံ့အားသင့်သွားသည် ။ “ ဟေ့ကောင်လေးတွေ..ကျောင်းထဲဝင်လေ…..” ကျောင်းစောင့်ကြီး ဦးစိန်လုံး ရဲ့ အသံသြသြကြီးကို ကြားလိုက်ရသည် ။ ဆရာဆရာမများ နားနေခန်း အနက်အောက်ခံမှာ အဖြူရောင် ထွင်းစာလုံးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ဆိုင်းဘုတ်လေး ရှိနေတဲ့ အခန်းလေးထဲကို ရဲလွန်း မရဲတရဲနဲ့ ၀င်လိုက်သည် ။ အတန်းခေါင်းဆောင် စိုးနိုင် လာပြောလို့ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်က သူ့ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည် ဆိုလို့ ဆရာမ ရှိနေတဲ့ ဆရာဆရာမများ နားနေခန်း ကို သူ လာခဲ့တာ ။ စိတ်ထဲမှာ ပူနေတာက နှာစာအုပ် ကိစ္စကို ဆရာမက ကျောင်းအုပ်ကြီးကို တိုင်လိုက်ပြီလား လို့ ။ အထဲမှာ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် ထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ တခြား ဆရာ ဆရာမတွေ ဘယ်သူမှ မရှိနေဘူး ။ “ ရဲလွန်း…လာ…လာ….ဒီကို…..” ဆရာမက လှမ်းခေါ်သည် ။ “ ရဲလွန်း….” “ ဗျာ…ဆရာမ….” “ မင်း ဒီစာအုပ် ဘယ်က ရလဲ…ဒါ ဘယ်သူ့စာအုပ်လဲ…” “ ဟို..ဟို……” “ ညာဖို့ စဉ်းစားမနေနဲ့ ရဲလွန်း….အမှန်အတိုင်း ဖြေကွာ…..” “ ကျ..ကျနော်….သန်းဝေ ဆီက ရတာပါ…” “ သေချာလား…” “ ဟုတ်….ဆရာမ…..” “ မင်း ဒါမျိုးတွေ ဖတ်တယ်ပေါ့လေ..စာတော့ မကျက်ချင်ဘူး….မင်း တော်တော် ဆိုးတဲ့ကောင်…” ရဲလွန်းလည်း ခေါင်းကြီး ငုံ့ပြီး ငြိမ်နေသည် ။ “ နောက်ကို ကျောင်းကို ယူမလာနဲ့..ဖတ်လည်း မဖတ်နဲ့….ကြားလား….” “ ဟုတ်…” “ ကဲ သွားတော့..မင်း သန်းဝေကို လွှတ်လိုက်..ဆရာမ တွေ့ချင်တယ် လို့ ပြောလိုက်…” “ ဟုတ်…..” “ ဟာ…..မင်း…မင်း..ဆရာမကို ဘာတွေ သွား ချွန်လိုက်လဲ ရဲလွန်း…….မင်းမေစပ်ပတ်…လီးဘဲ..လီးဘဲ…….ငါက ဘာလို့ ဆရာမဆီ သွားရမှာလဲ……” “ ငါ မချွန်ပါဘူး….နှာ စာအုပ် မင်းဆီက ယူဖတ်တာ လို့ ဘဲ ပြောလိုက်တာပါ……” “ ဟာ..မင်းကလည်း..ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံတာ မဟုတ်ဖူး..ငါ့နံမည်ကို ပြောလိုက်ရသေးတယ်ကွာ..ခက်တာဘဲ…….” သန်းဝေက ရှည်လျားတဲ့ သူ့ဆံပင် နီကြောင်ကြောင်တွေကို တဗျင်းဗျင်ူ ကုတ်ရင်း ပြောလိုက်သည် ။
သန်းဝေ ဆရာမဆီကို သွားလိုက်သည် ။ ဆရာမတွေ နားနေတဲ့ ရုံးခန်းလေးထဲမှာ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် တယောက်ထဲ ရှိနေသည် ။ “ ဆရာမ..ခေါ်တယ် ဆိုလို့……” သန်းဝေက ဆရာမကို မကြည့်ဘဲ ခေါင်းငုံ့ထားရင်း ပြောလိုက်သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်က “ သန်းဝေ..မင်းက ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ရဲလွန်းလို ကျောင်းသားကို ညစ်ညမ်းတဲ့ အပြာစာအုပ်တွေ ပေးဖတ်နေတယ်ကွာ..မင်း ဘာလို့ ဒီလို ကျောင်းသားအရွယ်တွေ မဖတ် သင့်တဲ့ အပြာစာအုပ်တွေကို ကျောင်းကို ယူလာတာလဲ…..မင်း ဒီနေ့ကော နောက်ထပ် စာအုပ် ပါလာသေးလား….” လို့ မေးလိုက်သည် ။ သန်းဝေလည်း မင်းထိုက် ပြောချက် အရ ဆရာမက သူ့အပြာစာအုပ်ကို ဖတ်သည် ဆိုတာကို သိထားတော့ “ ပါတယ် ဆရာမ တအုပ်ထဲပါ…..” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ “ ဟေ..ဟုတ်လား..သွား..အတန်းကို ပြန်ပြီး အဲဒီစာအုပ်ကို သွားယူလိုက်စမ်း……” “ ဘာ…ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာမ..စာအုပ်ကို သိမ်းလိုက်မလို့လား…..မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာမ ရယ်..ကျနော်က ငှားဖတ်တာပါ….ပြန်မအပ်နိုင်ရင် လျော်ကြေး ပေးရမှာ…..” “ ဟဲ့..သန်းဝေ…. ကောင်စုတ်..ကျောင်းခန်းထဲမှာ ဒီလို စာအုပ် မရှိသင့်ဖူးဟဲ့…သွားယူဆို ယူလိုက်…..” ဒေါ်မြမြနွယ် အော်လိုက်လို့ သန်းဝေ လန့်သွားသည် ။ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဆီကို ပို့ရင် မလွယ်ဘူး ။ မိဘတွေ ခေါ်ပြီး ဆုံးမတာတွေ ဖြစ်နိုင်သည် ။ “ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ…..” အတန်းကို ပြန်ပြီး လွယ်အိတ်ထဲက အပြာစာအုပ်လေးကို ဘလာစာအုပ်ကြားထဲ ညှပ်ပြီး ဆရာမများ နားနေခန်းကို ပြန်သွားလိုက်ရသည် ။ အတန်းထဲမှာ သူ့ကို ၇ဲလွန်းနဲ့ မင်းထိုက်က “ ဘာဖြစ်လဲ… ဘာဖြစ်လဲ…” လို့ လိုက်မေးသေးသည် ။ ဆရာ နားနေခန်းထဲမှာ ဆရာမ တယောက်ထဲ မဟုတ်တော့ဘူး ။ ဆရာဦးကြွယ်သိန်း ပါ ရောက်နေသည် ။ ဦးကြွယ်သိန်းက ဆရာမဒေါ်မြညမနွယ် နဲ့ မနီးမဝေးမှာ ထိုင်ပြီး စာအုပ်တအုပ် ကို ဖတ်နေ သည် ။ သန်းဝေက စညအုပ်ကို ဆရာမရဲ့ စားပွဲပေါ်ကို ချပေးလိုက်တော့ ဆရာမက “ ဟုတ်ပြီ..သန်းဝေ…မင်း အတန်းကို ပြန်တော့ ” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဗလာစာအုပ်ကိုလည်း ခြင်းတောင်းထဲကို ထည့်လိုက်သည် ။ ဦးကြွယ်သိန်းက မော့ကြည့်ပြီး “ သန်းဝေ..သန်းဝေ…..မင်း အတွက်တော့ ငါ ရင်လေးသေးတယ်..ဆရာတွေရဲ့ ပြောစကားကိုလည်း နားမထောင်ဘူး..” လို့ ညည်းလိုက်သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်က “ ဆရာ..သူ ဘာတွေ လုပ်သလဲ…ကျမကိုလည်း ပြောပြပါအုံး…” လို့ မေးလိုက်သည် ။ ဦးကြွယ်သိန်းက “ ဟာ..ဆရာမရယ်..ဒီကောင် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်.. ဆေးခြောက်၇ှူ တယ် ဗျ….ဟိုတနေ့ကလည်း ဘူကြီး ဆိုတဲ့ ကောင်နဲ့ ဘော်လုံးကွင်းထဲမှာ ထိုးကြရိုက်ကြတယ်…..” လို့ ပြောလိုက်သံကို သန်းဝေ ကြားလိုက်ရပေမယ့် တကျိုးထဲ လစ်ပြီ ။
ဒီနေ့ ကျောင်းဆင်းချိန်ကျရင် ဆရာမ က ဘယ်သူ့ကို အိမ်ကိုခေါ်ပြီး စာသင်မလဲ လို့ ရဲလွန်းတို့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ နားစွင့်နေကြသည် ။ သို့ပေမယ့် ဆရာမသည် သူတို့ အားလုံးကို အိမ်ကို မခေါ်သွားတော့ ။ အတန်းထဲက စာတော်တဲ့ ကျောင်းသူ မိုးစက် ကိုဘဲ ခေါ်သွားလိုက်သည် ။ ရဲလွန်းတို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွားကြသည် ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းကနေ ခေါင်းငိုက်ဆိုက်နဲ့ အိမ်ပြန်နေတဲ့ ရဲလွန်းကို အနောက်ကနေ လှမ်းခေါ်လိုက်တာကြောင့် ရဲလွန်း လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မိုးစက်နဲ့အတူ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်နေတဲ့ ဆရာမ ခေါ်တာ ဖြစ်နေသည် ။ စိတ်ထဲမှာ ဆရာမတော့ ငါ့ကိုလည်း ခေါ်မလို့ လား လို့ ထိန်းကနဲ ၀မ်းသာသွားသည် ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမ ပြောလိုက်တာက “ ရဲလွန်းရေ..မင်း ဟိုတတရက်က ပြောတာ ဆရာမ စဉ်းစားမိပြီး မင်းကို မနက်ဖန် စနေနေ့ မို့ အားတဲ့အချိန် ဆရာမ ခြံထဲက ခြုံတွေ မြက်တွေကို ရှင်းပေးဖို့ ခေါ်ချင်လို့..မင်း လာလုပ်ပေး နိုင်မလားကွ…” လို့ ပြောတာ ဖြစ်နေသည် ။ ဒါကိုလည်း ရဲလွန်း ၀မ်းသာတာဘဲ ။ စာမသင်ရဘဲ ဆရာမအိမ်ကို သွားရမှာကို ပိုတောင် သဘောကျသေးတယ်လေ..။ “ ဟုတ်ကဲ့…ဆရာမ..ကျနော် လာခဲ့မယ်….ဘယ်အချိန် လာရမလဲဟင်…” လို့ ပြန်မေးလိုက်သည် ။ “ အတိအကျရယ် မဟုတ်ပါဘူးကွာ..မနက်ပိုင် နေမမြင့်ခင်ပေါ့……” “ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ..ကျနော် လာခဲ့မယ်..မြက်ခုတ်ဖို့ ဓါးလည်း ယူခဲ့မယ်..” “ အေး..အေး…ကောင်းပြီကွယ်….မင်းကို ဆရာမက ထမင်း ကျွေးမယ်……” ရဲလွန်းလည်း ဆရာမ အိမ်ကို သွားရမှာကို အရမ်း ကျေနပ် ၀မ်းသာမိသွားရသည်….ပြီး ။